लगानी कोषको सञ्चालक समिति समावेशी बनाइने
नेप्सेमा सनराइज बैंकको ३० लाख इकाइ ऋणपत्र सूचीकृत
एलआइसी नेपालको प्रष्टीकरण–‘एलआइसी इण्डियाको कुनै पनि दायीत्वले हाम्रो विजिनेशमा असर पर्दैन’
पुनर्बिमा कम्पनीको १.६ अर्बको आइपीओले पायो ग्रेड टूको रेटिङ, आइपीओ भर्नेले रु. १ अर्बको बोनस सेयर पाउने
काठमाण्डौ । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले सर्वसाधारण र आफ्ना कर्मचारीका लागि जारी गर्ने भनिएको १ अर्ब ६० करोड बराबरको आइपीओलाई इक्रा नेपालले आइपीओ ग्रेड टूको रेटिङ प्रदान गरेको छ । यस्तो रेटिङको अर्थ कम्पनीको वित्तीय अवस्था औसत भन्दा माथि रहेको छ भन्ने हो । इक्रा नेपालले १ देखि ५ प्वाइन्ट स्केलमा ग्रेडिङ्ग प्रदान गर्दछ, जसमा ग्रेड १...
दुई माइक्रोफाइनान्सले पाए आइपीओ निश्कासन अनुमति, कुनको कति कित्ता आउँदैछ ?
काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले दुई लघुवित्त कम्पनीलाई आइपीओ निश्कासनको अनुमति दिएको छ । बोर्डले आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेड र घोडाघोडी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडलाई आइपीओ निश्कासनको अनुमति दिएको हो । भिरकोट १, बयरघारी, स्याङ्जामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडलाई बोर्डले ४...
हिमालयन हाइड्रोले रु. २२.५० करोडको आइपीओ निश्कासन गर्ने, जनता क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक
काठमाण्डौ । हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेडले आईपिओ निष्काशन गर्न जनता क्यापिटललाई बिक्रीप्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । हिमालयन हाइड्रोले रु. १०० अंकित दरको २२ लाख ५० हजार कित्ताको २२ करोड पचास लाख रुपैंया बराबरको आईपिओ निष्काशन गर्न लागेको हो । कुल निश्कासन गर्ने भनिएको कित्तामध्ये ९ लाख कित्ताको ९ करोड रुपैंया बराबरको शेयर परियोजना...
रिलायन्स लाइफले रु. ६३ करोडको आइपीओ निश्कासन गर्ने, सानिमा क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय नवीन प्रडक्ट ल्याएर पृथक पहिचान बनाएको रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले रु. ६३ करोड बराबरको आइपीओ निश्कासन गर्ने भएको छ । यो कम्पनीले जारी पूँजीको ३० प्रतिशतले हुन आउने रु. ६३ करोड बराबरको आइपीओ सर्वसाधारणका लागि निश्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यसका लागि रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले आइपीओको...
साञ्जेन र रसुवागढीको सेयर सूचीकृत हुन कम्तीमा साउनसम्म पर्खिनुपर्ने !
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)मा साञ्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावरको सेयर सूचीकरण साउनमा मात्रै हुने भएको छ । आइपीओ बाँडफाँड भएको करिब डेढमहिना बितिसक्दा हालसम्म पनि समेत यी दुई हाइड्रोपावरको सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छैन । नेप्सेमा सूचीकृत भई लगानीकर्ताहरुले खरिदबिक्री गर्न अझै अढाई...
इन्फिनिटी लघुवित्तको आइपीओमा अचाक्ली आवेदन, दुई दिनमै ६ गुणा आवेदन !
काठमाण्डौ । इन्फिनिटी लघुवित्तको आइपीओमा दोश्रो दिन मंगलबारसम्म करिब ६ गुणा बढी आवेदन परेको छ । बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमीटेडका अनुसार देशभरबाट यो कम्पनीको आइपीओमा दोश्रो दिन मंगलबार साँझसम्म १ लाख ७३ हजार ५३१ आवेदकले ३६ लाख ७१ हजार ५८० कित्ता खरीदका लागि आवेदन दिएका छन् । यो कम्पनीले कुल ६ लाख ७४ हजार ३०० कित्ता...
हिमाल-दोलखा हाइड्रोको रु. १६ करोडको आइपीओ खुल्यो, रु. ६२ करोडको चाँडै
काठमाण्डौ । हिमाल(दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमीटेडले आज(जेठ १४ गते)देखि आयोजना प्रभावितका लागि १६ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निश्कासन गरेको छ । कम्पनीले एकसय रुपैयाँ अंकित दरका १६ लाख कित्ता आइपीओ निश्कासन गरेको हो । आइपीओमा छिटोमा जेठ २८ गतेभित्र र ढिलोमा असार १३ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । इलाम नगरपालिकाको वडानम्बर ९ र १०,...
इन्फिनिटी लघुवित्तको आइपीओ निश्कासन, रु. १००० भए पुग्ने
काठमाण्डौ । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले सोमबार(जेठ १३ गते)देखि ६ लाख ७४ हजार ३०० कित्ता आइपीओ निश्कासन गरेको छ । रु. १०० अंकित दरका आइपीओ खरीदका लागि छिटोमा जेठ १६ गते र सो बेलासम्म सबै बिक्री नभए असार १० गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । इच्छुकले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ३३७० कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्...
काठमाण्डौ । देशकै पहिलो खुल्लामुखी म्युचुअल फण्डले आगामी जेठ १९ गतेदेखि इकाईहरुको बिक्री खुलाउने भएको छ । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएको एनआइबिएल एस क्यापिटलद्वारा प्रवद्र्धित ‘एनआइबिएल सहभागिता फण्ड’ नामको खुल्लामुखी स्किमले पहिलो चरणमा सर्वसाधारणका लागि आगामी जेठ १९ गतेदेखि १ करोड २५ लाख इकाईको बिक्री खुलाउने भएको हो...
हिमाल-दोलखा हाइड्रोको रु. १६ करोडको आइपीओ जेठ १४ देखि, रु. ६२ करोडको चाँडै
काठमाण्डौ । हिमाल-दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमीटेडले आगामी जेठ १४ गतेदेखि आयोजना प्रभावितका लागि १६ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीआ निश्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले एकसय रुपैयाँ अंकित दरका १६ लाख कित्ता आइपीओ निश्कासन गर्ने भएको हो । आइपीओमा छिटोमा जेठ २८ गतेभित्र र ढिलोमा असार १३ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । इलाम नगरपालिकाको...
नेपाल एग्रोको सेयर सूचिकृत, कति पायो ओपनिङ रेञ्ज ?
काठमाण्डौ । नेपाल एग्रोको आइपीओ दोश्रो बजारमा सूचिकृत भएको छ । योसँगै नेप्सेले यो कम्पनीलाई स्पेशल प्रि ओपनका लागि कारोबा रेञ्ज समेत तोकिदिएको छ। नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडको ४ लाख ९७ हजार ७७८ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो । यो कम्पनीलाई नेप्सले दोश्रो बजार कारोबारका लागि NAGRO (एनएग्रो) सिम्बोल उपलब्ध...
इन्फिनिटी लघुवित्तको आइपीओ जेठ १३ देखि, दश कित्ताका लागि आवेदन दिए पुग्ने
काठमाण्डौ । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले आगामी जेठ १३ गतेदेखि ६ लाख ७४ हजार ३०० कित्ता आइपीओ निश्कासन गर्ने भएको छ। रु. १०० अंकित दरका आइपीओ खरीदका लागि छिटोमा जेठ १६ गते र सो बेलासम्म सबै बिक्री नभए असार १० गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । इच्छुकले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ३३७० कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्...
बढ्दो बजारमा म्युचुअल फण्डमा लगानीको अवसर, जेठ ९ देखि सिटिजन्सको दोश्रो स्किमको आइपीओ
काठमाण्डौ । सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड अन्तरगतको दोश्रो स्किम सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ ले आगामी जेठ ९ गतेदेखि इकाईहरुको बिक्री खुलाउने भएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलको प्रवद्र्धन र सीबीआइएल क्यापिटल लिमीटेडको व्यवस्थापनमा प्रति इकाई १० रुपैयाँ दरको १० करोड इकाई निश्कासन हुने भएको हो । कुल निश्कासन हुने १० करोडमध्ये बिज...
जनसेवी र स्वाभिमानको आइपीओमा थामिनसक्नु आवेदन
काठमाण्डौ । जनसेवी लघुवित्त र स्वाभिमान माइक्रोफाइनान्सको आइपीओमा थामिनसक्नु गरी आवेदन परेको छ। आइपीओ खुलेको तेश्रो दिन सोमबार साँझ ५ बजेसम्म जनसेवीको आइपीओ ११.५० गुणा र स्वाभिमानको आइपीओ २६.६८ गुणाले ओभरसब्स्क्राइब्ड भइसकेको छ । सिडिएससीका अनुसार जनसेवी लघुवित्तको आइपीओमा २ लाख ७७ हजार ४३७ आवेदकबाट ४९ लाख ८२ हजार ८६० कित्ताका...
जनसेवी र स्वाभिमान माइक्रोफाइनान्सको आइपीओ निश्कासन, प्रत्येकमा रु. १००० हाले पुग्ने
काठमाण्डौ । जनसेवी लघुवित्त र स्वाभिमान माइक्रोफाइनान्सले शुक्रबार(आज)देखि आइपीओ निश्कासन गरेका छन् । जनसेवीले ४ करोड ६३ लाख र स्वाभिमान माइक्रोफाइनान्सले १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निश्कासन गरेका हुन् । जनसेवीको रु. १०० अंकित दरका कुल ४ लाख ६३ हजार कित्ता आइपीओ खरीदका लागि छिटोमा बैशाख ३१ गतेभित्र र सो अवधिसम्म बिक्री नभए...
दोस्रो त्रैमासमा सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको उत्कृष्ट प्रदर्शन, खुद नाफामा १०१%को छलाङ